वान बेल्ट वान रोड: भारतले थेग्‍न सक्ला चीनको दबदबा ? - Karobar National Economic Daily
वान बेल्ट वान रोड: भारतले थेग्‍न सक्ला चीनको दबदबा ?
query_builderMarch 20, 2017 6:28 PM supervisor_accountकारोबार visibility6646
बेइजिङ: आफ्नो बुहमहत्वकांक्षी 'वान बेल्ट वान रोड'मा साथ नदिए भारतले आफ्नो दबाब थेग्न नसक्ने चेतावनी चीनले दिएको छ । यो परियोजनामा भारतले बाहिर बसेर भन्दा व्यवहारिक हिसाबमै आफूलाई समाहित गर्नुपर्ने जोड चीनले दिएको हो ।
चीनले यसो गर्दा भारतका लागि पनि ठुलो फाइदा हुने बताएको छ । यदि भारतले यस परियोजनाबाट अलग राख्ने प्रयास गर्‍यो भने चीनको दबदबालाई उसले हेर्न बाध्य हुनुपर्ने चीनले उल्लेख गरेको छ ।
चीनले वान बेल्ट वान रोड परियोजनामार्फत युरोपसम्म सडक निर्माणको महत्वाकाङ्क्षी परियोजना अघि बढाइरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चैत १० बाट हुने चीन भ्रमणमा 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम बनिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा चीन सरकार नियन्त्रित पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, 'वान बेल्ट, वान रोडबारे चीनको प्रस्तावलाई विश्वभरबाट जबरजस्त समर्थन प्राप्त भइरहेको छ । यस्तोमा यदि भारत ओबीओआरबाट अलग राख्न चहान्छ भने उसले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चीनको बढ्दो दबदबालाई देखिरहन बाहेक अरु केही बच्दैन ।'
चीनले भारतको चिन्ताका बाबजुत ओबीओआरमा जबरजस्त अन्तरराष्ट्रिय समर्थन मिलिरहेको जनाएको छ । कयौँ देश र स‌ंगठनहरुले यसबाट आर्थिक विकास गर्ने पनि चीनको दाबी छ । भारतले पनि अब यसबारेमा सकारात्मकरुपमा सोच्नु जरुरी रहेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।
ग्लोबल टाइम्सको लेखमा कुनै बेला अमेरिकी अधिकारीले चीनको लगानीको एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लाई एक रणनीतिक गल्ती भनेको उल्लेख गर्दै भारतले पनि अमेरिकाबाट सिक्न जरुरी रहेको जिकिर गरिएको छ ।
'यदि भारतले चीनको यो परियोजनाको विरोधमा अन्य छिमेकी देशलाई सहभागी गराउन असफल भयो भने उसले विकासलाई सहयोग गर्नु जरुरी छ', 'यो उसका लागि धेरै फाइदाजनक सावित हुनेछ ।'
'कश्मिरलाई लिएर भारत-पाकिस्तानबीच विवाद चलिरहेको छ । यसकै कारण त्यसक्षेत्रमा नयाँ दिल्लीले लगानी गर्नबाट दुरी बनाइरहेको छ । तर, भारतले उसको लगानी कुन् कुरामा छ भन्ने उसले बुझ्नु जरुरी छ । र, यसले उसको सम्प्रभुतामा कस्तो असर पर्दैछ त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ', ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ ।
ओबीओआर राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गको बहुचर्चत परियोजना हो । यसमार्फत चीन छिमेकी देशका अलावा युरोपलाई पनि सडकबाटै जोड्न लागेको छ। यो परियोजनाले चीनलाई विश्वका कयौँ समुद्री बन्दरगाहमा जोड्ने छ ।
यो परियोजना अन्तरगत एउटा रुट बेइजिङलाई टर्कीसम्म जोड्ने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । यो आर्थिक मार्गबाट रूस-इरान-इराक पनि जोडिनेछन् ।
अर्को रुट भनेको दक्षिण चीन सागरमार्फत इन्डोनेसिया, बंगालको खाडी, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान र ओमानको बाटो हुँदै इराकसम्म जोड्ने छ ।
पाकिस्तानसँग बनिरहेको चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई पनि यसैको एउटा भाग मानिएको छ । अहिले ४६ बिलियन डलरको चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) को काम तीब्रगतिमा चलिरहेको छ ।
बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमारलाई जोड्ने गरी चीनले अर्को करिडोर (बीसीआईएम) पनि बनाउने तयारी थालेको छ । सीपीईसीमार्फत पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको शिनजियाङ्गसँग जोडिनेछ ।
यसमा सडक, रेल्वे, पावर प्लान्ट्स समेत कयौँ भौतिक पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ । सीपीईसीलाई लिएर भारतले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । भारतले सीपीईसी पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिर हुँदै जाने भएकाले यसले सुरक्षा जस्ता मुद्दामा गम्भीर असर पार्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
भारत नेपाल चीन वान बेल्ट वान रोड